'स्क्रीम' को सिक्वेलको रिलिज मिति तय भयो र सिडनी फर्कन्छ?
घर	हरर मनोरन्जन समाचार	'स्क्रीम' को सिक्वेलको रिलिज मिति तय भयो र सिडनी फर्कन्छ?
by तिमोथी Rawles मार्च 18, 2022
by तिमोथी Rawles मार्च 18, 2022 9,629 हेराइहरू
गत वर्ष पूरै फ्यानबेस विभाजित गर्ने चलचित्र, स्क्रिम, सिक्वेल, वा रिक्वेल, वा रि-रिक्वेल पाइरहेको छ। म्याद यो चलचित्र मार्च ३१, २०२३ मा हलमा रिलिज हुने बताइएको छ। रिपोर्टमा भनिएको छ कि यस वर्षको कम ब्लकबस्टरको पछाडि उही व्यक्तिहरू शृङ्खलाको अर्को अध्यायमा फर्किरहेका छन्।
एलआर, निर्माता विलियम शेराक, निर्देशक म्याट बेटिनल्ली-ओल्पिन, कार्यकारी निर्माता केभिन विलियमसन, निर्देशक टायलर गिलेट र कार्यकारी निर्माता चाड भिल्लाला प्यारामाउन्ट पिक्चर्स र स्पाइग्लास मिडिया समूहको "स्क्रीम" को सेटमा।
"को रिबुट चिच्याउनु, MLK सप्ताहन्तमा खोलिएको, विश्वव्यापी बक्स अफिसमा $140M+ कमाएको छ। प्यारामाउन्ट र स्पाइग्लासले तुरुन्तै निर्देशक म्याट बेटिनल्ली-ओल्पिन र टायलर गिलेट सहित सम्पूर्ण रचनात्मक गिरोह फर्केर एक सिक्वेललाई हरियोलाइट गर्यो, जेम्स भान्डरबिल्ट र गाय बुसिक पटकथा सह-लेखन, र Project X Entertainment को Vanderbilt, Paul Neinstein, र William Sherak निर्माण गर्दै केभिन विलियमसन र चाड भिलेला कार्यकारी निर्माण गर्दै।"
निस्सन्देह, यी चलचित्रहरू जाँदा, विवरणहरू कडा सुरक्षामा छन्, जसमा फर्कने पात्रहरूको नाम, कथानक विवरणहरू, र काम गर्ने शीर्षक समावेश छ।
लिगेसी क्यारेक्टरहरू फलो-अपको अंश हुनेछन् भने मुख्य प्रश्नहरू मध्ये एक हो। भन्ने जानकारी दिइएको छ कोर्टनी कक्स तल छ र आधिकारिक रूपमा कास्टमा सामेल भएको छ, तर क्याम्पबेलको के हो?
मार्च 18, 2022 सम्म, एक पूर्ण स्क्रिप्ट छ रिपोर्ट गरिएको छ, र गत महिना क्याम्पबेलले निर्णय गर्नु अघि यसलाई पढ्नु पर्ने बताइन्।
"अहिले सम्म कुनै स्क्रिप्ट छैन," क्याम्पबेलले भने त्यो बेला। “मलाई भनेको कुरा हो, चाँडै नै मस्यौदा आउँदैछ। वास्तवमा, मैले हिजो एक निर्मातालाई बोलाउनु पर्ने थियो, किनभने उहाँ मसँग के भइरहेको छ भनेर कुरा गर्न चाहनुहुन्थ्यो। तपाईलाई थाहा छ, हामी हेर्नेछौं। म स्क्रिप्ट पढ्छु र मलाई कस्तो लाग्छ हेर्छु। ”
छैटौं पटक फर्किने क्याम्पबेलको अस्पष्ट चासो प्रशंसकहरूको लागि ठीक हुन सक्छ। कसै-कसैलाई लाग्छ कि नयाँ फाइनल केटी मात्र यो शृङ्खलालाई आवश्यक पर्ने रिफ्रेसर हो र क्याम्पबेलको निकासले अर्को अभिनेतालाई बिरूद्ध स्क्वायर गर्न अनुमति दिनेछ। घोस्फेस भविष्यका किस्ताहरूको लागि।
मा फिर्ता जाँच जारी राख्न निश्चित हुनुहोस् iHorror यो समाचार र थप सबै विवरणहरूको लागि।